Zvingaita here kuti uwane quality domain backlinks?
Kugadzira mukana wekuvaka chikwata chekutsvaga, mumiriri webhusaiti anofanirwa kuziva zvizivo zvose zvinokosha maererano nehuwandu hwekushandura kwewebsite. Muchikamu chino, tichakurukura maitiro ekusiyanisa pakati pekutaura, uye kutonga backlinks uye ndeipi iyo inogona kupa iwe webhusaiti yekugadzirisa.
Chokutanga pane zvose, ngatitaurirei zvakawanda nezvemashoko aya maviri ekubatanidza kuvaka - kureva domain uye backlink.
Kazhinji kutaura, chigaro chinzvimbo chakasiyana-siyana chinotsanangurwa chakanyorwa mukati me URL. Somuenzaniso, mu URL "http: // www. semalt. com, "shoko rokuti" semalt "rinoshumira sezita rezita reimwe kambani yekugadzirisa uye rinowirirana nezita rezita iri sangano.
Kukurukura nzvimbo inozivikanwa seye nzvimbo yekuremekedza yeimba iyo backlink inouya kubva.
Uye pakupedzisira, backlink inosungirirwa pane imwe webhusaiti inotaridzira webhu yako.
Saka, kureva chiremera ndiko kwaunofambisa shure kwako, uye kumashure kunoshamwaridzana kune mawebsite anobatanidza kumaseri yako.
Ndizvo zvakakosha kuziva mutsauko pakati pesimba nekureva backlinks?
Nokuitisa tsvakurudzo yakawanda yewebsite uchishandisa imwe yeSemalt analyzer zana, unogona kuona kuti zviyero zvekutumira domains uye backlink zvinosanganiswa nejiji yako yewebhu.Mashoko aya mauri kutsvaga ndiwo muyano pakati pekutumira domain uye backlinks. Nemuenzaniso, kana iwe usina zvinyorwa zvisingabatsiri izvo zvinoratidza nzvimbo yako uye zvishomanana zvichitaura zvidzidzo, zvinoratidza kuti hurongwa hwekuvaka huripo hwakakosha uye hunoda humwe huri nani. Uyezve, Google inogona kuenzanisa chiyero ichi nemabasa emumvuri wave waita kuti uwane yakawanda ye backlinks. Pakupedzisira, inogona kukuvhiringidza nhaurwa yako yeji yewebhu. Tsvaga injini penalize high backlinks uye low referring domains sechiratidzo chekubhadharwa kubatanidza chirongwa (yega yega blog network).
Chii chaunofanira kuita kuti uwane zviri nani kumashure?
Kana tsvakurudzo yako yepawebhuku inoratidza kuti une zvinetso zvakajeka nekunze kwako, unofanira kutanga kutarisa nzira itsva dzekuwana domain backlinks. Tanga nekugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvehutano zvewebsite yako iyo inogona kuva yakakosha kune vadzidzisi vako vanogona. Nokuita kudaro, iwe uchawana organic link juice sezvo vashandi vanogona kugovana humwe hwehutano hwavo mukati meumwe. Uyezve, fambisa tsvakurudzo yako yepamisika kuti uwane kwaunokwanisa kuisa shure kwako. Taura nevanowiri vewebsite kana mablogiki ayo anogutsikana anoita semhando yako uye ovakumbira kuti vape rubatsiro rwekuvaka chikwata chako chekuvaka. Havazoiti chero chinhu. Ndosaka iwe uchifanira kuvapa mamwe mazano anobatsira kana kubhadhara.
Zvakare, unogona kuwana zvakadzama shure kwekushandisa bhajiti. Iko mukana wakaisvonaka wekupa bhizinesi rako kuvanhu vose. Iva nechokwadi chekuti unosika unhu uye uine hutano hweblogi dzinotungamirirwa nevashandisi. Zvinyorwa zvako hazvifaniri kutinzwika semushambadziri pamwe chete nere backlink inofanira kutarisa zvisikwa mazviri Source .